Lehilahy iray mpanefy volamena no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao Atsirabe ny alakamisy 8 janoary lasa teo noho ny halatra volamena. Fivadiham-pitokisana nataon’ilay mpiasa amin’ny mpampiasa azy no nahavery ny volamena izay mitentina 128.000.000Ariary. Taorian’ny fitarainana izay nataon’ny tompon’ny volamena dia nanao ny fikarohana avy hatrany ny polisy tao Antsirabe, vaingam-bolamena milanja 1kg 963g no nampitondraina an’ilay mpiasa hoentina tefena avadika firavaka. Rehefa tonga tao amin’ny atelier dia navelany tao ny 1kg 117g ary nentiny nitsoaka kosa ny 846g. Tratra teny amin’ny tranon’ny zaodahiny ity olondratsy nitondra ity, ary tratra niaraka taminy tao koa ireo volamena nentiny nitsoaka izay nataony tao anaty gony nisy saribao. Efa naverina tamin’ny tompony moa ireto volamena ireto. Taorian’ny famotorana dia natolotra ny fampanoavana ity heverina ho mpangalatra ity.